Tixgalinta Istaraatiijiyadda Mobilada
Monday, June 4, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Adam Yar
Ma qorsheyneysaa inaad si weyn u aqbasho kaqeybgalka moobiilka? Waxaa jira tixgelinno badan oo shirkaduhu aysan si fudud u fileynin ama aysan u shaqeyneynin si loo kordhiyo istiraatiijiyadooda mobilada. Hubso inaad tixgeliso talooyinka soo socda:
Teknoolojiyad aan xuduud lahayn - In kasta oo tiknoolijiyada ku lug lahaanshaha moobiilku aysan weli si buuxda u imaan, haddana shirkadaha waa inay ku dhisaan qaab dhismeedkooda hareeraha dariiqa ku saleysan daruurta taas oo isu keenta waxyaabaha, diiwaanka, quudinta bulshada, xogta aaladda, adeegyada SaaS, Analytics iyo qaar kaloo badan.
Wicitaanka Wicitaanka - Tani waxay run u tahay xitaa qaababka dhaqameed ee ka-qaybgalka oo diiradda saaraya faafinta macluumaadka ama wacyi-gelinta, laakiin in ka badan ayaa loogu talagalay ka-qaybgalka moobiilka halka mantra ee guusha lagu bixinayo waaya-aragnimo adeeg u jahaysan. U rogida caqligaaga naqshadeynta caadiga ah foorar iyo naqshadeynta badhanka ficillada halkii aad foomamka ka dhigi laheyd, adiga oo dhigaya waxqabadka iyo ka jawaab celinta macaamiisha si siman oo leh is-dhexgal iyo astaan.
Analytics - U qaabeynta mobilada waxay qaadan kartaa dadaal aad u badan taas Analytics badanaa wuxuu noqdaa fikir dambe. Si kastaba ha noqotee, iyada oo kakanaanta codsiyada moobiilka iyo is-dhexgalka Analytics iyada oo loo marayo xirmooyinka horumariyeyaasha barnaamijyadooda (SDKs) AMA isku dhafka caadiga ah Analytics shaashadaha firfircoon iyo bogagga firfircoon si ay u soo qabtaan dhacdooyinka, waxaad u baahan doontaa inaad waqti uga tagto jadwalka horumarinta si aad wax u saxdo.
Warbaahinta bulshada - Laga soo bilaabo awoodda aad ku soo gali karto mobilka, u dirista barnaamijka, wadaagista bulshada, bulshada ayaa ah qodob weyn oo ku saabsan isticmaalka moobiilka. Guusha ugu dambeysa ee istiraatiijiyadaha kaqeybgalka moobiilku waxay kuxirantahay qaabeynta adeegyada ganacsiga si loogu kala gooyo nolol maalmeedka macaamiisha ama shaqada.
Local - SOMOLO ma aha oo kaliya jargon warshadeed, Bulshada Wareegta Bulshada wuxuu qeexayaa codsiyada sida ugu dhakhsaha badan u koraya iyo qaybaha kaqeybgalka ee warshadaha mobilada. Xitaa haddii sheygaaga ama adeeggaagu uusan ahayn mid maxalli ah, si uun juqraafi ahaan ugu dhex darista istiraatiijiyaddaada moobiilka waxay wadi kartaa dhaqdhaqaaqyo badan.
Farriinta Qoraalka (SMS) weli waa nool yahay waana caafimaad qabaa. Ha dhayalsan gaaritaankiisa ama natiijooyinka lagu gaari karo ololeyaal aad u fudud.
Email - Yahoo! waxay soo warinaysaa in 20% dhammaan soo booqdayaasha ay hadda ku booqanayaan aaladda mobilada… waana ognahay taas emaylka mobilada sicirka furan waxay ku dhowdahay laba jeer taas. Hadaadan ahayn Naqshadaynta emaylkaaga shaashadda yar, uguyaraan akhyaartu ma aqrinayaan… iyo wax ka sii daran could waa laga yaabaa inay ka baxaan diiwaangelinta.
Mobile Apps - ha iloobin sida ay u caan yihiin codsiyada kale ee mobilada, sida Facebook, Youtube, barnaamijyada sawirrada, wadaagista Muusikada, Meelaynta, iwm
Shaashado yaryar way sii weynaanayaan… waxayna soo bandhigayaan go'aamo sare. Naqshadaynta codsiyada jawaabta leh ee ka faa'iideysanaya cabbirka shaashadda iyo xallinta ayaa kordhin doonta adeegsiga iyo ka-qaybgalka.
Ammaanka - Hackers-ku marwalba waxay kujiraan socodka si ay u weeraraan taleefannada casriga ah, Hackers-ka oo adeegsanaya nuglaanshaha barnaamijka shirkaddaada si aad ugu durto malware-ka taleefanka casriga ah ayaa ah waxa ugu dambeeya ee aad u baahan tahay.
Hababkani waxay u baahan karaan mid cusub Sarkaalka dhaqdhaqaaqa kaasoo ku lug leh howlaha ganacsiga aasaasiga ah isla markaana awood u leh inuu soo saaro istiraatiijiyado ka-qaybgalka moobiilka halkii uu ka noqon lahaa "Sarkaalka Tiknoolajiyadda Sare" oo madax ka ah waaxda farsamada ee gaarka ah.
Tags: falanqaynta moobiilkaNaqshadeynta mobiladamarketing mobilemobile wareegaistaraatijiyad mobile
La-qiimeyn karo oo Adag Korjoogteynta SEO
Jun 7, 2012 saacadu markay ahayd 11:12 AM
Ka waran kan ugu muhiimsan dhammaantood: nuxurka ?!
Kuwani waxay ahaayeen tixgelinno aan dadku badanaa fiiro gaar ah u siin, Michael. Marnaba kama doodi doono in nuxurku yahay # 1.
Jun 8, 2012 saacadu markay ahayd 4:23 AM
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada Douglas. Tixgalinnada istiraatiijiyadeed ee aad sheegaysaa waa kuwo qiimo leh. Laakiin waayo-aragnimadayda dadku si gaar ah uguma fiirsadaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin: - / Waxay u janjeeraan inay xoogga saaraan farsamada, qalabka, kanaallada, iwm. Mawduucu waa muhiim. Laakiin nuxurka weyn ayaa ah wax walba. Mahadsanid & ugufiican, Michiel